Mozilla, Google, Apple ary Microsoft dia manambatra hery hanara-penitra ny add-on | Avy amin'ny Linux
Nanambara ny W3C Andro vitsy lasa izay ny fananganana vondrona fiarahamonina antsoina hoe "WebExtensions" (WECG) izay tena asanyMiara-miasa amin'ireo mpamatsy tranonkala aho ary antoko hafa liana hampiroborobo ny sehatra fampandrosoana plugin Browser mahazatra miorina amin'ny WebExtensions API.
Ity vondrona miasa ity dia misy solontena avy amin'ny Google, Mozilla, Apple ary Microsoft ary ny tsipiriany novolavolain'ny vondrona miasa mikendry ny hanamora ny famoronana plugins izay miasa amin'ny navigateur samihafa.
Ny W3C dia milaza fa mikasa ny hahatratra an'io tanjona io izy amin'ny famaritana modely holistic sy ny fampiasa iraisana iraisana, ny API ary ny rafi-pahefana, ho fanampin'ny zava-misy izay hamaritan'ny vondrona miasa ihany koa ny maritrano mifameno hanatsara ny fahombiazana, hanamafisana ny fiarovana ary hanome fiarovana amin'ny ny fanararaotana.
Rehefa mamolavola antsipiriany dia soso-kevitra ny hanaraka ireo fitsipika ampiharina amin'ny W3C TAG (Vondron'orinasa arsitrafika), toy ny fifantohan'ny mpampiasa, ny fifandraisan'ny rehetra, ny filaminana, ny fiainana manokana, ny fivezivezena, ny fikojakojana ary ny fitondrantena azo vinavinaina.
La Tranonkala WECG milaza fa ny tanjon'ny vondrona dia ny mamaritra ny fotokevitra iraisana, ny maodely ary ny fahazoan-dàlana API hanitatra ny fanitarana tranonkala, milaza fa:
Amin'ny alàlan'ny famaritana ireo WebExtensions API, fampiasa ary alalana, azontsika atao ny manamora kokoa ny fanatsarana ireo mpamorona fanitarana ny traikefa ho an'ny mpampiasa farany, sady mamindra azy ireo amin'ny API izay manatsara ny fahombiazana ary misoroka ny fanararaotana.
Hatreto dia namorona tahiry GitHub natokana ilay vondrona ary natambatra a satan'ny vondrom-piarahamonina ho fanomanana ny asa atrehana izay faritana toy ny:
Amin'ny fampiasana ny maodely fanitarana efa misy sy ny API tohanan'ny Chrome, Microsoft Edge, Firefox, ary Safari ho toy ny fototra, dia hanomboka hamaritra ny famaritana iray izahay. Ny tanjonay dia ny mamantatra ny marimaritra iraisana, mampifanakaiky ny fanatanterahana ary manome ny làlana ho an'ny fivoarana ho avy.
Ireo API sy modely fampivoarana plugin efa ampiasaina ao amin'ny Chrome, Microsoft Edge, Firefox, ary Safari dia hampiasaina ho fototry ny andinindin-teny namboarina. Ny vondrona miasa dia hiezaka ny hamantatra ireo fiasa iraisana ho an'ny mpitety tranonkala rehetra amin'ny famoronana plugins, hampifanakaiky kokoa ny fampiharana, ary hanoritsoritra ireo fomba mety hisian'ny fampandrosoana.
Ao amin'ny taratasim-piasana, hoy izy ireo Ireto toro lalana manaraka ireto:
User-centric: Ny fanitarana browser dia ahafahan'ny mpampiasa manamboatra ny traikefany fitetezana tranonkala miorina amin'ny safidiny sy ilain'izy ireo.
mifanentana: mitazona sy manatsara ny fifanarahana amin'ireo extensions misy sy API fanitarana malaza. Io dia hahafahan'ny mpamorona tsy mila manoratra tanteraka ny fanitarana azy ireo mba hiasa amin'ny mpizaha isan-karazany, izay mety iharan'ny hadisoana.
Performance: avelao ny mpamorona hanoratra fanitarana izay tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny zava-bita na fanjifana herinaratra amin'ny pejin-tranonkala na ny mpitety tranonkala.
fiarovana: Rehefa misafidy izay fanitarana hampiasana dia tsy tokony hanaiky lembenana amin'ny fampiasana sy fiarovana ny mpampiasa. Miaraka amin'ireo API fanitarana vaovao, hisy fanovana hatao amin'ilay maodely.
Privacy: Toy izany koa ny mpampiasa tsy tokony hanaiky lembenana amin'ny fampiasa sy ny fiainana manokana. Satria ny hevi-dehibe dia ny fanitarana ny fanamoriana ny fanandramana ataon'ny mpampiasa raha toa ka mitaky ny fidirana faran'izay kely ilaina amin'ny angon-drakitra fizahana ny mpampiasa mba hampihenana na hanafoanana ny fifanakalozana izay tsy maintsy ataon'ny mpampiasa farany eo anelanelan'ny fampiasa sy tsiambaratelo.
Portability: Tokony ho mora ho an'ny mpandrindra ny mamindra ny fanitarana avy amin'ny mpitety iray mankany amin'ny iray hafa, ary ho an'ireo mpanamory dia manohana ny fanitarana amin'ireo fitaovana sy rafitra miasa.
Fikojakojana: Amin'ny fanatsorana ny API, ity dia tokony hamela ny vondrona mpamorona misimisy kokoa hamorona fanitarana ary hanamora ny fitanan'izy ireo ny extensions noforonin'izy ireo.
Fahaleovan-tena: ireo mpamatsy fizahan-tany dia tokony hanome fampiasa manokana ho an'ny mpitety tranonao ary tokony hanana fotoana hanandramana fiasa vaovao koa.
W3C dia nanambara mazava izany tsy natao hibaiko izay tena vitan'ny mpamorona sy tsy azony foronina amin'ny fanitarana. Tsy izy ireo ihany koa no hanondro, hanara-penitra na handrindra manodidina ny fanaovan-tsonia na fanaterana ireo fanitarana. Te hamporisika ny fanavaozana fotsiny izy ireo raha mitazona ny tsiambaratelon'ny mpampiasa sy ny fiarovana amin'ny fomba iray izay mitovy amin'ny solaitrabe rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mozilla, Google, Apple ary Microsoft dia manambatra hery hanara-penitra ny add-ons
raha fintinina: ampihimamba marobe